Hattıhareket Nasıl Yazılır Ne Demek Sözlük Anlamı Nedir - Nasıl Yazılır. İnfo
Uyibhala njani intshukumo yomgca
Ukuhamba komgca Upelo oluchanekileyo
Amagama ayinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla. Kwaye ukusebenzisa la magama ngokuchanekileyo kubaluleke kakhulu kulwalamano lwabantu. Xa uthumela i-imeyile okanye isicelo somsebenzi kumntu okanye umbutho esijongene nawo, kufuneka silumke kakhulu ngendlela amagama abhalwe ngayo. Ngesi sizathu, iya kuba yinto efanelekileyo ukufumana uncedo kumthombo oqinileyo.
Siphila kwiminyaka yetekhnoloji, sonke sinefowuni okanye ithebhulethi. Izinto ezininzi ezididayo zinokuvela nanini na, naphi na. Nangoku siyabhengeza kwaye sibhale amagama amaninzi angalunganga esaziyo ukuba achanekile. Ngelishwa, la magama siwabhalayo ngaphandle kokwazi abangela ukuvela kwenkcubeko.
Ngokukodwa kwiimviwo ezibhaliweyo kunye negama lamagama enkqubo yeemviwo eziphambili, ngokubanzi imibuzo eyi-1-2 inxulumene neempazamo zopelo. Iimpazamo zopelo zibandakanyiwe kumhlathi okanye kwizakhiwo, kwaye kule mibuzo, impendulo yeyiphi yale mibuzo yenziwe okanye engabuzwanga. Kungenxa yoko le nto indawo yethu ye-nasilyazilir.info yenzelwe ukukunceda. Unokufikelela kumgaqo wopelo olungileyo nangaliphi na ixesha kwaye ube nolwazi malunga nendlela elisetyenziswa ngayo elo gama kwisivakalisi.
Ukuhamba komgca Kuthetha ntoni?
Uyibhala njani intshukumo yomgca?
Isikhokelo sokuhambisa isipelingi isikhokelo
Uhlobo lwe stenotype